Ny orinasanay dia niorina tamin'ny taona 2005 ary ny foiben-toeran'ny foibeny dia ao shijiazhuang izay toerana kanto any Chine. Ny asa lehibe dia misy ny famokarana sy ny varotra ny vokatra azo avy amin'ny zava-mahadomelina sy ny famonoana afo, ary koa ny fanondranana teknolojia klôro dioksida. Ny orinasanay, mikendry ny fampandehanana maharitra sy ny fampandrosoana maharitra, dia manizingizina hatrany amin'ny finoana mifantoka amin'ny fananganana marika tsara ho an'ny orinasa ary handresy ny tsena sy ny mpanjifa amin'ny kalitaon'ny vokatra tsara sy serivisy tsy azo antoka.
Ny fahamarinana no fototra
Ny orinasa dia manaraka hatrany ny fitsipiky ny finoana tsara
Mandresy ny tsena sy ny mpanjifa amin'ny vokatra avo lenta.
Mahazo ny fitokisanao sy ny fanohananao amin'ny serivisy sy ny kalitaonay